D2 dopamine receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်းမှရှောင်ကြဉ်နေစဉ်လူမှုရေးအရကျိန်းဝပ်အထီးမျောက်များတွင်အသစ်အဆန်းကိုတုံ့ပြန်မှု (၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
ကိုကင်း (2) မှ abstinence စဉ်အတွင်းလူမှုရေးအရသျောအထီးမျောက်တွေကို D2010 dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များ
comments: ကြီးစိုးနေသောတိရစ္ဆာန်များ D2 receptors ၏အဆင့်မြင့်ရှိသည်ပြလျက်, သူတို့လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမတိုင်မီကြာကြာယူပါ။ လူသားမြားသညျတှငျ, ကြီးစိုးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်ဘဝအကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားဖို့ဘာသာ။ ဒီထက်အသစ်အဆန်းဖို့ဆွဲဆောင်စွဲခြင်းနှင့်သင်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုစိတ်ကျေနပ်မှု feeling ဖြစ်လာဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဆိုလိုသည်။
Psychopharmacology (Berl) ။ 2010 Mar;208(4):585-92. doi: 10.1007/s00213-009-1756-4.
Czoty PW1, Gage, HD, Nader, MA.
လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုလေ့လာရေးဦးနှောက် dopamine D2 receptors နှင့်ရေရှည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် dissipates ကြောင့်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအပေါ်လူမှုရေးကြီးစိုးအဆင့်ဆင့်အတွက်အနေအထားတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသရုပ်ပြပါပြီ။
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကို D2 receptors အပေါ်ကိုကင်းကနေ abstinence ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန်နှင့်တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုမှ reactivity ကို၏အစီအမံမှအမူအကျင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေတိုးချဲ့ရကြ၏။
ကျယ်ပြန့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတဆယ်နှစ်ပါးသောလူမှုရေးအရသျောအထီး cynomolgus မျောက် (ပျမ်းမျှအားတစ်သက်တာစားသုံးမှု ~ 270 နှင့် 215 မီလီဂရမ် / အသီးသီးကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အဘို့အကီလိုဂရမ်) ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Abstinence [D8 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် D2 ligand သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သောပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2လလောက်ကြာ18F ကို] fluoroclebopride ။ အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းထိုအဘာသာရပ်များအဖြစ်ကိုးတစ်ဦးချင်းသျောမျောက်တွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
abstinence အတွင်း caudate နျူကလိယအတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုလက်အောက်ခံမျောက်နှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိမှပျမ်းမျှအောင်းနေချိန်လက်အောက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းသျောမျောက်နှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးမျောက်တွေကိုလည်းသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးအရအတွေ့အကြုံရှိမျောက်များမှာတော့သိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှု caudate နျူကလိယ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိမှ latency အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်မှလူမှုရေးကြီးစိုးများ၏စွမ်းရည်ကို blunts ပေမယ့်, ဒီသြဇာလွှမ်းမိုးမှု abstinence စဉ်အတွင်း reemerges ။ ထို့အပြင်ဒေတာလူမှုရေးကြီးစိုးနှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှအနိမ့်အားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်အသစ်အဆန်း-တစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်မဟုတ်တော့ latency ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: လူမှုရာထူး, အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှု, PET ပုံရိပ်, အားနည်း, Nonhuman မျောက်ဝံများ
လူမှုရေးအရသျော nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်အစောပိုင်းကအလုပ် dopamine (DA) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နဲ့အကဲဖြတ်အဖြစ်, (လက်အောက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြီးစိုးမျောက်တွေကိုပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရet al ပေးသနား။ 1998; မော်ဂန် et al ။ 2002) ။ (ဤလေ့လာမှုများတစ်ဦးအတွက်, D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကြီးစိုးမှီကြောင်းမျောက်တွေကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% အထိတိုးလာပေမယ့်လက်အောက်ငယ်သားအတွက်မပြောင်းလဲခဲ့မော်ဂန် et al ။ 2002) ။ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလက်အောက်ခံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးစိုးမျောက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသိသိသာသာလျော့နည်းကင်းကြောင်းအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့မြင့် D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် (လူသားများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသောအရာကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်လွှမ်းမိုးမျောက် "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်" ကြောင်းပေါ်လာသည်Volkow et al ။ 1999; Thanos et al ။ 2001; Nader et al ။ 2006; Dalley et al ။ 2007).
ဒီလေ့လာမှုတွေကလူမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်အနေအထားအစောပိုင်းထိတွေ့မှုကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ညွှန်ပြ; သို့သော်လျော့နည်းကျယ်ပြန့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းနှင့်အတူမျောက်တွေကိုလူမှုရေးရာထူး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ မျောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းခဲ့တခါအထက်တွင်ဖော်ပြထားအုပ်စု-သျောမျောက်ခုနှစ်, D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လူမှုရေးရာထူး-related ကွဲပြားခြားနားမှု (ရှုလေ့လာကြသည်မဟုတ်Czoty et al ။ 2004) ။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏လွှမ်းမိုးမှု D2 receptors အပေါ်ကိုကင်းများ၏သွယ်ဝိုက် pharmacological သက်ရောက်မှုကြောင့်အပြင်ပန်း, အချိန်ကျော် dissipated ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လူမှုရေးရာထူး-related ကွဲပြားခြားနားမှုရေရှည်ကိုကင်းထိတွေ့အပြီးအပိုင်လူမှုရေးရာထူးနှင့်ဆက်စပ်သော neuroplasticity မရှိတော့သောဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်စေ, အခြားနည်းလမ်းကိုကင်းကနေ abstinence စဉ်အတွင်း reemerge သို့မဟုတ်မယ်လို့ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ် ဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤလေ့လာမှု၏နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်ကင်း-အတွေ့အကြုံရှိမျောက်များအတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏အစီအမံအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ Preclinical လေ့လာမှုများ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အားနည်းချက်၏ရှုထောင့်အကြားချိတ်ဆက်မှုထူထောင်ခဲ့ကြDawe နှင့် Loxton 2004; Verdejo-Garcia က et al ။ 2008) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုအဖြစ် Impulse အမျိုးမျိုးရှုထောင့်များ၏အစီအမံ, psychostimulants ၏အလွဲသုံးစားမှု-related အပြုအမူဆိုးကျိုးများ (ဥပမာဖို့ sensitivity ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် Piazza et al ။ 1989, 2000; Bardo et al ။ 1996; ပယ်ရီ et al ။ 2005; Dalley et al ။ 2007) ။ မြင့်မားသောအသစ်အဆန်းရှာယေဘုယျအားဖြင့် (အနိမ့် subcortical D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ပိုမိုမြင့်မား extracellular DA အဆင့်ဆင့်နှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင်အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Piazza et al ။ 1991; ချိတ် et al ။ 1991; Rouge-ပိုတငျး et al ။ 1993; Dalley et al ။ 2007) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့အသစ်အဆန်းများနှင့် caudate နျူကလိယနှင့်ကင်း-ကြုံတွေ့လူမှုရေးအရသျောမျောက်များ၏ putamen အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုမှတုံ့ပြန်မှုများ၏ဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်; တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့အောင်းနေချိန်တစ်ဦးချင်းသျောကင်း-ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုမျောက်ကနေဒေတာတွေကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်များတွင် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာ၏အစီအမံအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကြီးစိုးမျောက်လက်အောက်ထက်လျော့နည်းတုံ့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ (ဆိုလိုသည်မှာရှည် latency တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိမှ) နှင့်အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လူမှုရေးရာထူး-related ကွဲပြားခြားနားမှုလိုကြောင်း D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြိုင်ကွဲပြားခြားနားမှု။
နှစျဆယျ့တစျအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး cynomolgus မျောက် (Macaca fascicularis) ဘာသာရပ်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအမျောက်ဆယ်နှစ် (2 နှစျကျြောသုံးလေးအုပ်စုများ၌ကျိန်းဝပ်လျက်ရှိတဲ့သမိုင်းရှိခဲ့တယ်Czoty et al ။ 2004, 2005b) ။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်ရဲ့ start မှာခြောက်လမျောက်အုပ်စုတစ်စုနှုန်းသုံးခုမျောက်နှစ်ခုလူမှုရေးအုပ်စုများတှငျနထေိုငျ, ခြောက်မျောက်အချင်းချင်း pair တစုံ-သျောခဲ့ကြသည်။ အားလုံး 12 (ကိုကင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခု fixed-အချိုး (FR) အချိန်ဇယားကိုဖြစ်စေအောက်မှာထက်ပို2နှစ်ပေါင်းတစ်ပတ်ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းရက်ပေါင်းများစွာခဲ့Czoty et al ။ 2004) သို့မဟုတ်အစားအစာနှင့်ကိုကင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခုတွင်တစ်ပြိုင်တည်း FR အချိန်ဇယား (Czoty et al ။ 2005b) ။ ယခင်ကြီးစိုးမျောက်တွေကိုအတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားမျှပျမ်းမျှအားတသက်တာမှာကွဲပြားခြားနားမှုသို့မဟုတ်အတိတ်နှစ်ကင်းစားသုံးမှု (ရှိခဲ့သည်စားပွဲတင် 1) ။ ကျန်ရှိနေသေးသောကိုးမျောက်တစ်ဦးချင်းသျောနှင့်မျှမတို့ယခင်ကင်းထိတွေ့မှုရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းအမူအကျင့်အဆုံးမှတ် (ကဝတ္ထုအရာဝတ္ထုမှ reactivity ကို) ရက်နေ့တွင်လူမှုအိမ်ရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျောက်တစ်နိုင်လွန်ကော်လာ (မျောက်ထုတ်ကုန်များ, ရက်ဒ်ဝုစီးတီး,, CA, USA) နဲ့တပ်ဆင်နှင့်ကော်လာ (မျောက်ထုတ်ကုန်များ) ကိုပူးတွဲတစ်ဦးအထူးဒီဇိုင်းသံမဏိတိုင်သုံးပြီးစံမျောက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကုလားထိုင် (မျောက်ထုတ်ကုန်များ) တွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထိုင်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ။ မျောက်အပတ်စဉ်အလေးချိန်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအဆင့်ဆင့်၏ 95% ခန္ဓာကိုယ်အလေးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နေ့စဉ်အလုံအလောက်အစားအစာ (Purina မျောက် Chow နှင့်လတ်ဆတ်သောအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်) တိုက်ကျွေးခဲ့သည်။ 5.3 ကီလိုဂရမ် (SEM, 0.7 ကီလိုဂရမ်) ပျမ်းမျှအရာခန္ဓာကိုယ်အလေး, abstinence ကာလအတွင်းသိသိသာသာမပြောင်းနဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားကွဲပြားခြားနားသောမခဲ့ပါဘူး။ ရေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရရှိနိုင်ကြော်ငြာ libitum ဖြစ်ခဲ့သည်။
လူမှုရေးအဆင့်အညီမျောက် '' ကိုကင်းသမိုင်း (ကီလိုဂရမ်လျှင်မီလီဂရမ်), abstinence ကြာချိန် (ရက်), နှင့် abstinence ကာလအတွင်းအော်ပရေတာအပြုအမူများ၏ဖော်ပြချက်,
မျောက် (0.71 × 1.73 × 1.83 မီတာ; Allentown လှောင်အိမ်ပစ္စည်းကိရိယာ, Co. , Allentown, NJ, USA) သံမဏိလှောင်အိမ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ quadrant သို့မျောက်ကွဲကွာကြောင်းဖြုတ်ဝါယာကြိုးကွက် partitions ကို (0.71 × 0.84 × 0.84 မီတာ) နှင့်အတူ။ လူမှုရေးအရသျောမျောက်အော်ပရေတာအမူအကျင့်အစည်းအဝေးများနှင့်နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းနာရီပေါင်းများစွာနေ့စဉ်ကွဲကွာကြသည် ဟူ. ၎င်း, partitions ကိုတစ်ဦးချင်းသျောမျောက်အဘို့အရာဌာန၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူမှုအဆင့်အတန်းကိုယခင်က (တွေ့မြင်ယခင်ကဖော်ပြထားသူတို့အားအလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု. agonistic တွေ့ဆုံများ၏ရလဒ်များအရသိရသည်တစ်ခုချင်းစီကိုမျောက်အဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ Kaplan et al ။ 1982; Czoty et al ။ 2005b, 2009) ။ အတိုချုပ်နှစ်ဦးလေ့လာသူသီးခြားစီကလောင်နှုန်းတော်တော်များများ 15-မိလေ့လာရေးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ , ရန်လိုလကျအောကျခံနှင့် Affiliate အပြုအမူတွေကိုယခင်ကဖော်ပြထားတစ်ခု ethogram အဆိုအရမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် (စားပွဲတင် 1 အတွက်ကြည့်ရှု မော်ဂန် et al ။ 2000Wageningen, အဆိုပါနယ်သာလန်);) Noldus Observer software ကို (Noldus သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသုံးချဖို့။ ဤအ focal အုပ်စုတစ်စုအစည်းအဝေးများအတွက်, အပြုအမူတွေနှစ်ခုစလုံး Initiative နှင့်လက်ခံသူများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကလောင်ထဲမှာမျောက်အားလုံးအခြားသူတွေဆီသို့ aggressing အဘယ်သူမျှရန်တင်ပြ #1 (အများဆုံးကြီးစိုး) အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါမျောက်သတ်မှတ်ထားသောအများဆုံးလက်အောက်ခံရန်လိုအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းပြသနှင့်ဘောပင်တစ်ချောင်းထဲမှာအားလုံးသည်အခြားမျောက်များမှတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ သုံးမျောက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီကလောင်မှာ # 2-အဆင့်မျောက်အများဆုံးကြီးစိုးမျောက်မှတင်သွင်းခြင်းနှင့်အများဆုံးလက်အောက်ခံမျောက်မျက်နှာသို့ aggressed; အရှင်သုံးခုမျောက်ပါဝင်သည်ကြောင်းခြံများတွင်အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း linear နှင့် Transit ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများအဘို့, # 1-အဆင့်မျောက် (လွှမ်းမိုးစဉ်းစားခဲ့ကြn= 5), နှင့်အခြားမျောက် (လက်အောက်ခံဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြn= 7) ။ တိရိစ္ဆာန်အိုးအိမ်များနှင့်ကိုင်တွယ်အပေါင်းတို့နှင့်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 2003 အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ မနိုးသစ်တောတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဝိတ်သစ်တောတက္ကသိုလ်က Non-လူ့မျောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စီမံကိန်းများ၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီထဲမှာဖော်ပြထားအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဦးနှောက်တစ်ဦးခန္ဓာဗေဒကိုယ်စားပြုမှုသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကို အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီလူမှုရေးအရသျောမျောက်များအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကြိုတင်တစ်စကင်ကိုမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 မိ, ဘာသာရပ်များ ketamine (15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, im) နဲ့ anesthetized နှင့် MRI စက်ရုံပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ မေ့ဆေး ketamine ဖြည့်စွက်အတူစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည့်အခါလိုအပ်သောစဉ်အတွင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်ပြည်နယ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေအတွက် 3D ပျက်စီးကြောင်း gradient ကို-ပြန်ပြောပြရှာမှီး, (ပဲ့တင်သံအချိန် 5, အထပ်ထပ်အချိန် 45, လှန်ထောင့် 45, လက်ခံ bandwidth ကို 15.6 kHz, အမြင်လယ်ပြင် (FOV) 18 စင်တီမီတာ, 256 × 192 matrix ကို, အချပ်အထူ2မီလီမီတာဝယ်ယူခဲ့သည် တစ်ဦး 3-T က GE Signa ရော်ဘာစကင်နာ (GE ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ) နဲ့စိတ်လှုပ်ရှား 1.5 အရေအတွက်) ။ T1 မာန်တင်းတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ပုံရိပ်များခန္ဓာဗေဒပေပုံရိပ်တွေနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင် coregistration အဘို့, လက်ျာနှင့်လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ, putamen (0.5 မီလီမီတာအချင်းဝက်) နှင့် cerebellum (0.8 မီလီမီတာအချင်းဝက်) အပါအဝင်အကျိုးစီးပွားအလင်းဆုံဒေသများ (ROIs), သတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းသျောတိရိစ္ဆာန်များပေနှင့်အတူလေ့လာခဲ့မခံခဲ့ရပါ။
abstinence စဉ်အတွင်းပေ Scan ဖတ် [သည့် D2 အဲဒီ receptor radioligand သုံးပြီး D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုတိုင်းတာရန်တစ်ဦးချင်းစီမျောက်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်18F ကို] fluoroclebopride (FCP), အ D2 ကဲ့သို့ superfamily (ဆိုလိုသည်မှာ, D ကို၏ Subtype အကြားခွဲခြားမ2, D ကို3နှင့် D ကို4 receptors; Mach et al ။ 1996) ။ ကိုကင်းကနေ abstinence ၏ကြာချိန် (လွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူးစားပွဲတင် 1) ။ 10 / ကီလိုဂရမ် ketamine mg နှင့်ပေရေးစင်တာမှသယ်ယူပို့ဆောင်နှင့်အတူအသီးအသီးလေ့လာမှုမတိုင်မီကမျောက် anesthetized ခဲ့ကြသည်။ [နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်18F ကို] FCP ပေါင်းစပ်ခြင်း, PET data တွေကိုရှာမှီး protocol ကို, သွေးနမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် metabolite ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပြည့်အဝ (ယခင်ကဖော်ပြထားပါပြီMach et al ။ 1993a, b, 1996, 1997; Nader et al ။ 1999) ။ အတိုချုပ်တစ်ဦးသည်သွေးလွှတ်ကြောနှင့်သွေးပြန်ကြောပြွန်အသီးသီး, သွေးနမူနာနှင့် tracer ဆေးထိုးဘို့ percutaneous ချောင်းကိုအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကလက်ခြေသေသောသူအေးဂျင့် (0.07 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် vecuronium Br, ဃ) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်နှင့်လေဝင်လေထွက်အဆိုပါ 3-ဇ PET scan ကတစ်လျှောက်လုံးအသက်ရှူကိရိယာအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ vecuronium ၏ဖြည့်စွက်ဆေးများ (0.1 မီလီဂရမ် / ဇ) လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်နှင့်အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာ (နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား, အသက်ရှူနှုန်းနှင့်အပူချိန်) ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ပုံရိပ်တွေဟာ General Electric ကြိုတင် NXi ပေကင်နာအပေါ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုတည်းစကင်မှာကြိုတင် NXi အမြင်တစ်ခု 35-စင်တီမီတာ axial လယ်ကိုအုပ်စိုး 4.25-မီလီမီတာစင်တာ-to-စင်တာအကွာနှင့်အတူ 15.2 transverse ချပ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစကင်နာ၏ transaxial resolution ကိုတစ်ဦးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ် filter ကိုနှင့်အတူပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ 3.8 စင်တီမီတာတစ်ဦးချင်းဝက်မှာ tangential မီလီမီတာ radial နှင့် 7.3 မီလီမီတာ 5.0 ဖို့ FOV ၏ဗဟိုမှာ 20 မီလီမီတာကနေနေကြပါတယ်။ ၎င်း၏ axial resolution ကိုတစ်ဦးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ် filter ကိုနှင့်အတူပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ 4.0 စင်တီမီတာတစ်ဦးချင်းဝက်မှာမီလီမီတာ 6.6 မှဗဟိုမှာ 20 မီလီမီတာကနေနေကြပါတယ်။ ဒီစကင်နာမြင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက DeGrado et al ။ (1994)။ အဆိုပါစကင်ရဲ့ start ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5MCI [at18F ကို] FCP heparinized ဆား၏3ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ (ကြည့်ရှုကင်ကောက်ယူခဲ့ကြပုံတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဘာသာရပ်ရဲ့ MRI မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် Czoty et al ။ 2005a) ။ တစ်ရှူးအချိန်-လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်ချင်းစီဘာသာရပ်ရဲ့ Co-မှတ်ပုံတင် MRI အပေါ်သတ်မှတ်ထားသော ROIs အတွက် radiotracer ပြင်းအားများအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယနှင့် putamen များအတွက်ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး (DVR) ကိုရည်ညွှန်းဒေသနှင့်များ၏ဂရပ်ဖစ်နည်းလမ်းအဖြစ် cerebellum အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် Logan et al ။ (1996)။ ထို့ကြောင့် DVR [သတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုအညွှန်းကိန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်18တစ်ဦးချင်းစီရွယ်အတွက် binding က F] FCP ။
ကိုကင်းမှရှောင်ကြဉ်စဉ်မျောက်ရှစ်လုံးသည်အခြားမည်သည့်ဆေးမျှမရရှိခဲ့ပါ။ မျောက်သုံးကောင် (C-6528, C-6628 နှင့် C-6629) တို့သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများမတိုင်မီတုံ့ပြန်မှုမတိုင်မီ serotonin 1A receptor agonist 8-OH-DPAT (<ပတ် ၀ န်းကျင် ၀.၄ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်း) ကိုထိုးသွင်းပေးခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း FR အစားအစာနှင့်ဆားရရှိနိုင်မှုဇယား (Czoty et al ။ 2005b) ။ လပေါင်းများစွာကျော်, ကို C-6526 အစားအစာနှင့် midazolam ရရှိနိုင်မှု (အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုများ) ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါအချိန်ဇယားအောက်တွင် benzodiazepine midazolam ၏ 4.7 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ PET scan မတိုင်မီဒီမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်လွန်အနည်းဆုံး 4.5 လ။ ထိုကာလအတောအတွင်းအပေါင်းတို့နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် abstinence များ၏ကြာချိန်အဘို့, မျောက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက် operating အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်အပြုအမူလေ့လာမှုများပါဝင်ခဲ့။ တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့, မျောက် quadrant သို့လှောင်အိမ် partitioning အားဖြင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီမျောက်တစ်ဦးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကုလားထိုင်များတွင်ထိုင်နှင့်လေဝင်လေထွက်, အသံ-attenuating အခန်းထဲက (1.5 × 0.74 × 0.76 မီတာ; Med Associates မှအရှေ့ဖဲရ်ဖီးလ် VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ အဲဒီ session အတွင်းအော်ပရေတာလီဗာ (FR50) ရက်နေ့တွင် 50 တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု 1-ဆအစားအစာတောင်၏ပေးပို့မှု။ 30 စစ်ကူရယူခဲ့ကြောင်းသို့မဟုတ် 60 မိကြာမှီတိုင်အောင်အစည်းအဝေးများပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆို, ကြာခဲ့သည်။
အဆိုပါလူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုအပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးချင်းသျောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုကင်းကနေ abstinence စဉ်အတွင်းတစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့အောင်းနေချိန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဘာသာရပ်ရဲ့အိမျလှောင်အိမ်ကပ်လျက်လှောင်အိမ်ထဲမှာမျောက်ဖယ်ရှားပြီးခဲ့ပထမဦးစွာ, partition ကိုလှောင်အိမ်အကြားကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်, ထိုဘာသာရပ်ကပ်လျက်လှောင်အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ partition ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုခဲ့သည်ထို့နောက်အနက်ရောင် Plexiglas လုပ်ထားတဲ့ 30.5 × 20.3 × 20.3 စင်တီမီတာကိုတိုင်းတာတဲ့ box ကိုမျောက်ရဲ့လက်ချည်းအိမ်ပြန်လှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ partition ကိုနောက်တဖန်ဖယ်ရှားပြီးနှင့်အရာဝတ္ထုကိုထိဖို့မျောက်များ၏အောင်းနေချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မျောက် 15 မိအတွင်းမှာအရာဝတ္ထုမထိခဲ့ဘူးဆိုလျှင်, 900 s ကိုတစ်ရမှတ်တာဝန်ကျတယ်။ အားလုံးအစည်းအဝေးများမျောက်ရဲ့လူမှုရေးရာထူးတစ်ခုလေ့လာသူမျက်စိကန်းသောအားဖြင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သွင်းယူခဲ့ကြသည်။ အတန်ငယ်လိုမင်းထက်, အ 900-s ကိုအများဆုံးကြာချိန်စဉ်တွင်ပဏာမဒေတာ (က Bennett ကများနှင့် P ကို ​​Pierre ၏, အတည်မပြုရသေးသော) အပေါ်အခြေခံပြီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကြိုတင်ဒီစမ်းသပ်မှုရဲ့ start မှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက် DVRs သုံးပြီးလွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။ တချို့ကြီးစိုးမျောက် 900 ့အတွင်းအရာဝတ္ထုမထိခဲ့ပါဘူးနှင့်အရှင်, 900 တစ်ရမှတ်တာဝန်ကျကှဲလှဲတဲ့ (nonparametric) Kruskal-Wallis ဟာတလမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) အသုံးပြုခဲ့သည်, post ကို hoc မန်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောကြောင့်, ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု reactivity ကိုနှင့်စပ်လျဉ်း -Whitney U စမ်းသပ်မှုများ။ နောက်ဆုံးတွင်လူမှုရေးအရသျောမျောက်အတွက် latency အကြားဆက်စပ်မှုဝတ္ထုအရာဝတ္ထုထိ [မှ18F ကို] က caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက် FCP DVRs တစ်ဦး (nonparametric) Spearman ရဲ့ရာထူးဆက်စပ်မှုကိန်းကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ကွဲပြားမှုသည့်အခါကစာရင်းအင်းသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ p
အဆိုပါ caudate နျူကလိယထဲတွင်ပျမ်းမျှအား DVR (လက်အောက်မျောက်နှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးမျောက်တွေကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့t10= 2.96, p<0.05; သဖန်းသီး။ 1) ။ လွှမ်းမိုးမျောက်ကိုလည်း putamen အတွက်ပိုမိုမြင့်မားပျမ်းမျှအား DVR ခဲ့ပေမယ့်ဒီခြားနားချက် (စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူးp= 0.121) ။
D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု ([18ငါးကြီးစိုးအတွက် caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက်က F] FCP DVR) (D) နှင့်လက်အောက်ခံခုနစ်ခု (S) မျောက်။ အက္ခရာများ တစ်ဦးချင်းစီမျောက် (တွေ့မြင်ညွှန်ပြ စားပွဲတင် 1). အလျားလိုက်လိုင်း [ယုတ်ညွှန်ပြ18F ကို] FCP DVR ။ *p
အစားအစာထိန်းသိမ်းထား abstinence စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်
စစ်ကူများ (± SEM) နံပါတ်များကိုဆိုလိုနှင့်မျောက် '' ပေ Scan ဖတ်မှာပြခင်နောက်ဆုံးငါးအပြုအမူအစည်းအဝေးများကျော် (± SEM) တုန့်ပြန်မှုနှုန်း (တစ်စက္ကန့်တုံ့ပြန်မှု) ကိုဆိုလိုတာ စားပွဲတင် 1။ အတူစိတ်ပိုင်းဖြတ်အဖြစ်ဤအ variable တွေကိုမရာထူးဖြတ်ပြီးကွဲပြား t စမ်းသပ်မှုများ။
အဆိုပါ Kruskal-Wallis ဟာ ANOVA (ထိုဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့အောင်းနေချိန်အပေါ်အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ညွှန်ပြK= 8.73, p<0.05) ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 2ယင်းဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့ကြီးစိုးမျောက်များ၏ latency သိသိသာသာရှည်လက်အောက်ခံ (မန်း-Whitney များထက်ခဲ့ကြသည် U= 3.00, p<0.05) နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကျိန်းဝပ်မျောက်များ (မန်း - Whitney U= 2.00, p<0.01) ။ အုပ်စုနှစ်စုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားစွာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ထို့အပြင်လူမှုရေးအရအတွေ့အကြုံရှိသောမျောက်များတွင် caudate နျူကလိယ၌ဝတ္ထုနှင့် D2 receptor ရရှိနိုင်မှုနှေးကွေးမှုအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 3; Spearman rho = 0.663, p<0.05) သို့သော် putamen တွင်မပါရှိပါ။ (Spearman rho = 0.4718) p= 0.122) ။
လွှမ်းမိုးငါးဦး (တစ်ဦးဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့စက္ကန့်အတွင်း latencyDOM), ခုနစျပါးလက်အောက်ခံ (SUB), ကိုးတစ်ဦးချင်းသျော (IND) မျောက်။ အက္ခရာများ တစ်ဦးချင်းစီမျောက် (တွေ့မြင်ညွှန်ပြ စားပွဲတင် 1), *p
D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး ([18အဆိုပါ caudate နျူကလိယသို့မဟုတ် putamen နှင့်အသစ်အဆန်း (ကဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့စက္ကန့်အတွင်းအောင်းနေချိန်) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်က F] FCP DVR) လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကို
မျောက်များအတွက်ယခင်သုတေသန (လူမှုရေးကြီးစိုး၏ဆည်းလက်အောက်ခံမျောက်နှိုင်းယှဉ် D2 အဲဒီ receptor အဆိုပါ Basal ganglia အတွက်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုအောက်ပိုင်း sensitivity ကိုအတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်မော်ဂန် et al ။ 2002) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအခြားလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် data ကိုနောက်ထပ် (ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် sensitivity ကိုအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးဟာသရုပ်ပြVolkow et al ။ 1999; Thanos et al ။ 2001; Nader et al ။ 2006; Dalley et al ။ 2007) ။ မျောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းခဲ့ပြီးနောက်, caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုမရှိတော့ဆက်လက်လူမှုရေးအိမ်ယာ (ရှိနေသော်လည်းကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားကွဲပြားCzoty et al ။ 2004) ။ မျောက်လူမှုရေးအရကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinence စဉ်အတွင်းသျောကျန်ရစ်နေချိန်တွင်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ရာထူး-related ကွဲပြားခြားနားမှု reemerged ။ ကိုကင်းကနေ abstinence ၏ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 လ, လွှမ်းမိုးမျောက်များ၏ caudate နျူကလိယထဲတွင်ပျမ်းမျှအား D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု 26 လက်အောက်-တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများထက်% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အဆိုပါ putamen အတွက် D2 ရရှိနိုင်မှုလက်အောက်နှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးမျောက်တွေကို 15% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကင်းထိတွေ့မှုရပ်စဲခံခဲ့ရသည့်အခါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း5ရက် / ရက်သတ္တပတ်မှထိတွေ့မှု၏နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေသော်လည်း, ဦးနှောက် D2 receptors သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များမှတုံ့ပြန်မှုကနျြရ, ထိုထိုကဲ့သို့သော neuroplasticity ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လွှမ်းမိုးမျောက်လက်အောက်ထက်အသစ်အဆန်းမှလျော့နည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်, ဤအတိုင်းအတာအပြုသဘော caudate နျူကလိယအတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မူလလေ့လာမှု D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (လွှမ်းမိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်မျောက်တွေကိုတိုးလာပေမယ့်လက်အောက်ငယ်သားအတွက်မပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြမော်ဂန် et al ။ 2002) ။ လက်အောက်ခံမျောက်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့အဆိုပါခြောစိတ်ဖိစီးမှုကနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်အထိလူမှုရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုစဉ်ဆက်ကြီးစိုးတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့အဖြစ်ကျနော်တို့ကို (ကြီးစိုးအဆင့်ဆင့် conceptualized ပါပြီNader နှင့် Czoty 2005) ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုတဦးအနက် abstinence ၏2လအကြာလေ့လာတွေ့ရှိ D8 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ရာထူး-related ခြားနားချက်ကြီးစိုးမျောက်တွေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဖို့ထိတွေ့မှု၏ရလဒ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်၏အစပိုင်းမှာကျနော်တို့ '' တစ်ဦးချင်းစီမျောက်တွေကိုရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ဒီအယူအဆအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ် [18F ကို] FCP DVRs ရုံမရောက်မီ (ဆိုလိုသည်မှာ, Czoty et al ။ 2005b) နှင့် abstinence ကာလအတွင်း။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီနှိုင်းယှဉ်အချို့သောမျောက်များများအတွက် abstinence စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းလူမှုရေးရာထူးအပြောင်းအလဲများအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုရေရှည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေရလဒ်ကြောင့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ငါတို့ယခင်ကတစ်ဦးချင်းသျောမျောက်တွေကိုအတွက်သရုပ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း (ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီနှုန်းထားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဒါမှမဟုတ်လျှောက်လျော့နည်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ၏အတိုင်းအတာအားဖြင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သောကြောင့်Nader et al ။ 2006) ။ ဒါဟာအတွက်မျောက်များ၏ပျမ်းမျှအတိတ်နှစ်ကင်းစားသုံးမှုကြောင်း, သို့သော်သတိပြုရကျိုးနပ်သည် Nader et al ။ (2006) လေ့လာမှု (787.8 ± 128.0 / ကီလိုဂရမ်သာရှိပြီးပြည်ပမှ 84.4 ± 29.7 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် mg) ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်မျောက်များ၏ထက်နီးပါးဆယ်ဆပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုလွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ထူးခြားလာသောမှတဆင့်ယန္တရားများ, abstinence ၏ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 လကာနားလည်မှုရှုပ်ထွေးသော်လည်း, လွှမ်းမိုးမျောက် '' DVRs လက်အောက်ငယ်သားများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုတစ်ဦးကိုကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ဦးနှောက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုမှတုံ့ပြန်မှုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်ကိုအကြံပြုသည်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်မောင်းထုတ်ဦးနှောက် DA အဲဒီ receptor စနစ်များ plasticity ၏ဆန္ဒပြပွဲအတွက်တည်ရှိသည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေတစ်ဦးအပိုဆောင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ, D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင်အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကြောင့်အသစ်အဆန်း-တစ်ဝိသေသမှတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ် Piazza et al ။ 1989, 2000; Bardo et al ။ 1996) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့အိမ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာတစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိဖို့ကြီးစိုးမျောက်များ၏ပျမ်းမျှအောင်းနေချိန်ကြီးစိုးဖြစ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံ (ဆိုလိုသည်မှာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်) ၏ဤအတိုင်းအတာလျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြု, ကြာကြာလက်အောက်ခံများနှင့်တစ်ဦးချင်းသျောမျောက်များ၏ထက်သိသိသာသာခဲ့သည် အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှု။ ဒါဟာလက်ရှိလေ့လာမှုများအတွက်မျောက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကို Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းခဲ့သော်လည်းယခင်လေ့လာမှုများ, ကိုကင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များ '' ကနဦးအတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာမှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များကိုများထဲမှအရေးကြီးသောဆိုလိုအသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်လူမှုရေးကြီးစိုး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကိုကင်းစားသုံးမှု၏မျောက် '' သမိုင်းမှဖယ်ရှားပစ်မခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တဦးတည်းကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလူမှုရေးအိုးအိမ် predated နှင့်နောက်ဆုံးရာထူး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ သည်, ကအသစ်အဆန်းမှပိုမိုမြင့်မား reactivity ကိုဖော်ပြရန်လေ့အဘယ်သူသည်မျောက်လက်အောက်ခံဖြစ်လာဖို့ပိုများပါတယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေ supporting, ကြိုတင်လူမှုရေးအိုးအိမ်မှအကဲဖြတ်တစ်ဦးဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိမှအမျိုးသမီး cynomolgus မျောက် '' latency နောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ရှိ. , သက်ရောက်မှု၏ညှနျကွား (ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားဆင်တူခဲ့သည်Riddick et al ။ 2009) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, သို့သော်, တစ်ဦးချင်းသျောအထီးမျောက်များ၏ latency သူတို့အနာဂတ်လူမှုရေးရာထူးခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းအကြံပြုဖို့နည်းနည်းအကြား-ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်အတူအနိမ့်ခဲ့သညျ။ ဤအမျောက်နောက်ဆုံးမှာလူမှုရေးအုပ်စုများသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့, နောက်ဆုံးရာထူးဝတ္ထုအရာဝတ္ထု (ပြမဟုတ်) ထိ latency အားဖြင့်ခန့်မှန်းမရခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်ရှိလေ့လာမှုမှာ, လူမှုရေးအတွေ့အကြုံနှင့်မရှိဘဲမျောက်များ၏တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်အတွေ့အကြုံကို Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းသဖြင့်ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါ, သို့သော်, မှတ်သားရပါမည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမျောက်အတွက်ရလဒ်တွေကိုအကြားခြားနားချက်အခြေခံအကြောင်းရင်းများစူးစမ်းခံရဖို့ဆက်လက်တည်ရှိပေမယ့်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လွှမ်းမိုးမျောက်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုကိုထိမှသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား caudate နျူကလိယ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုမြင့်မား latency ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအဆုံးစွန်သောနှစျတငျးအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဒေတာအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုကြောင်းလူသားတွေအတွက်ပေဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီZald et al ။ 2008) နှင့်ထပ်မံ D2 dopamine receptors နှင့်အသစ်အဆန်းရှာအပါအဝင် Impulse အမျိုးမျိုးရှုထောင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းအကဲဖြတ်တွင်ထင်ဟပ်ကဒေါသ variable တွေကိုအကြား link ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ radiotracer, FCP သည် D ကိုမှချည်နှောင်2, D ကို3နှင့် D ကို4 receptors ၏ D2 မိသားစု၏ Subtype; မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများအသစ်အဆန်းများနှင့် Impulse (ဥပမာနှင့်ဆက်စပ်သောသည်အခြားအစီအမံမှတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေတွင်ဤ Subtype ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ, Retz et al ။ 2003; Mufano et al ။ 2008) ။ ထိုမှတပါး, Dalley နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (2007) ကိုကင်းများပိုမိုထကြွလွယ်သောနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် သာ. ကြီးမြတ်ပမာဏဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်သူကိုကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အတော်လေးနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကဲဖြတ်အဖြစ် "Impulse" နှင့်စိတ်ထားဤရှုထောင့်အကြားရှိထပ်တူအမျိုးမျိုးဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများဖြင့်တိုင်းတာသည့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည် (Dellu et al ။ 1996; Stoffel နှင့် Cunningham 2007) ဤအစီအမံများကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စွမ်းရည်သူတို့ psychostimulants များ၏အလွဲသုံးစားမှု-related သက်ရောက်မှုမှတိုးမြှင့်အားနည်းချက်ထင်ဟပ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမူအကျင့် phenotype ကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုထို့အပြင်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ယခင်လေ့လာမှုများ (မော်ဂန် et al ။ 2002; Czoty et al ။ 2004, 2005b) ဒီသုံးခုဝိသေသလက္ခဏာများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထူးသ, သူတို့ကလူမှုရေးကြီးစိုး D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်မှုနိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်တဲ့ပုံစံသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့, (ဆိုလိုသည်မှာရှည် latency တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်မထိရန်) အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လျော့နည်းစေနှင့်မှ sensitivity ကိုအတွက်လျော့နည်းစေ ကိုကင်းများ၏အလွဲသုံးစားမှု-related ဆိုးကျိုးများ။ အဆိုပါဆရာမှဤလေ့လာမှုများတစ်ဦးပြန်လည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုတစ်ခုထိရောက်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာသုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ငွေ R37 DA10584 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခသတင်းပို့ရန်နှင့် DRs နေဖြင့်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု reactivity ကိုအကဲဖြတ်နှင့်အတူအကူအညီဝန်ခံချင်ပါတယ်။ လီစ Bennett ကနှင့်ပေတရု Pierre နှင့် Kimberly က Black ရောဘတ်ဒဗလျူသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်နဲ့ Michelle Icenhower ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများ။
Bardo MT, Donohew RL, Harrington Ng ။ အသစ်အဆန်းရှာနှင့်အပြုအမူရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Psychobiology ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1996; 77: 23-43 ။ [PubMed]
Czoty PW, မော်ဂန်: D, Shannon EE, Gage, HD, Nader, MA ။ dopamine D1 နှင့်လူမှုရေးအရသျော cynomolgus မျောက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းအတွက် D2 အဲဒီ receptor function ကို၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Psychopharmacology ။ 2004; 174: 381-388 ။ [PubMed]
Czoty PW, Gage, HD, Nader, MA ။ နာတာရှည် raclopride ကုသမှုကထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုး: nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် striatal dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ synapses ။ 2005a; 58: 215-219 ။ [PubMed]
Czoty PW, McCabe ကို C, Nader, MA ။ ရွေးချယ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးလူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိ၏အကဲဖြတ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005b; 312: 96-102 ။ [PubMed]
Czoty PW, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် RW, Nader, MA ။ အထီး cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးရာထူးနဲ့ Cortisol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး (Macaca fascicularis) J ကို Neuroendocrinol ။ 2009; 21: 68-76 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို, Robinsin ES, Theobald DE, Laane K ကို Pena Y ကို, Murphy က ER, Shah က Y ကို, Probst K ကို Abakumova ငါ Aigbirhio FI, Richards ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင် Y ကို, Baron JC, Everitt BJ, Robbins TW ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dawe S က, Loxton NJ ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စားပုံမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 28: 343-351 ။ [PubMed]
DeGrado TR, Turkington TG, Williams ဟာ JJ, Stearns CW, ဟော့ဖ်မန်း JM, Coleman RE ။ တစ်ဖွဲ့လုံး-ခန္ဓာကိုယ်ပေစကင်နာများစွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို Nucl Med ။ 1994; 35: 1398-1406 ။ [PubMed]
Dellu က F, Piazza PV, Mayo အဘိဓါန် W က, က Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ်ကြွက်-အမူအကျင့်လက္ခဏာများအတွက်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-ရှာနှင့်လူအတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံရိုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကြားဆက်ဆံရေး။ Neuropsychobiology ။ 1996; 34: 136-145 ။ [PubMed]
Ka, Shively, CA, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Morton TE, Gage, HD, Mach RH အပေးသနား။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်တွေကို striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ synapses ။ 1998; 29: 80-83 ။ [PubMed]
ချိတ်က MS, ဂျုံးစ် GH, Smith ကအေဒီ, Neill DB, တရားမျှတမှု JB ။ , အသစ်အဆန်းမှ Jr တုံ့ပြန်မှုဟာ locomotor နှင့်နျူကလိယကိုကင်းတုံ့ပြန် accumbens ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ synapses ။ 1991; 9: 121-128 ။ [PubMed]
Kaplan JR, Manuck SB, သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်တီဘီ, Lusso FM ရေ, Taub DM ။ လူမှုရေးအခြေအနေ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုသွေးကြော။ Arteriosclerosis ။ 1982; 2: 359-368 ။ [PubMed]
Logan J ကို, မုဆိုး JS, Volkow ND, ဝမ် GJ, Ding YS, Alexoff DL ။ ပေအချက်အလက်များ၏ဂရပ်ဖစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှအသှေးကိုနမူနာမရှိဘဲဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1996; 16: 834-840 ။ [PubMed]
et al Mach RH အ, အသက်ကြီး ST, Morton TE, Nowak PA ဆိုပြီး, Evora PH သည်, Scripko JG, Luedtke RR, Unsworth CD ကို, Filtz T က, Rao က AV စနစ်။ ပေ radiotracer ပေါင်းစပ်အတွက် [18F] 4-fluorobenzyl iodide တို့ (အက်ဖ်ဘီအိုင်) ၏အသုံးပြုမှုကို: မော်ဒယ် alkylation လေ့လာမှုများနှင့် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor-based ပုံရိပ်အေးဂျင့်များ၏ဒီဇိုင်းအတွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာ။ Nucl Med Biol ။ 1993a; 20: 777-794 ။ [PubMed]
Mach RH အ, Luedtke RR, Unsworth CD ကို, Boundy VA သို့, Nowak PA ဆိုပြီး, Scripko JG, အသက်ကြီး ST, Jackson က JR, ဟော့ဖ်မန်း PL, Evora PH သည်, et al ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography အတူ dopamine D18 အဲဒီ receptor လေ့လာနေဘို့ 2F-တံဆိပ်ကပ် benzamides ။ J ကို Med Chem ။ 1993b; 36: 3707-3720 ။ [PubMed]
Mach RH အ, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Smith က CR, Luedtke RR, Kung-အမတ်, Kung-HF, လီယွန်: D, Morton TE ။ နှစ်ခု fluorine တို့-18 ၏နှိုင်းယှဉ် dopamine D2 receptors မှ reversibly ခညျြနှောငျကြောင်း benzamide အနကျအဓိပ်ပါယျတံဆိပ်ကပ်: စသည်တို့စည်းနှောင်လေ့လာမှုများနှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography ၌တည်၏။ synapses ။ 1996; 24: 322-333 ။ [PubMed]
Mach RH အ, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Smith က CR, Gage, HD, Morton TE ။ psychostimulant-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ဒိုင်းနမစ်လေ့လာဖို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography ၏ကိုသုံးပါ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997; 57: 477-486 ။ [PubMed]
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Prioleau oa, Nader SH, Kaplan JR, Nader, MA ။ အုပ်စုတစုဖွဲ့စည်းပြီးနောက် cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်အတန်းခန့်မှန်း (Macaca fascicularis) ။ နံနက် J ကို Primatol ။ 2000; 52: 115-131 ။ [PubMed]
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau အို Nader SH, Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer RL, Nader, MA ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 169-174 ။ [PubMed]
Mufano MR, Yalcon B, သေတမ်းစာ-Owen SA, dopamine D4 အဲဒီ receptor ၏ Flint ဂျေအသင်း (DRD4) မျိုးဗီဇများနှင့်ချဉ်းကပ်-related ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ: Meta-analysis သည်နှင့်အချက်အလက်အသစ်ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 197-206 ။ [PubMed]
Nader, MA, Czoty PW ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမျောက်မော်ဒယ်များအတွက် dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများ: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ်မျိုးဗီဇ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1473-1482 ။ [PubMed]
Nader, MA, Grant က ka, Gage, HD, Ehrenkaufer RL, Kaplan JR, Mach RH အ။ [အတူ dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်18F ကို] မျောက်တွေကို fluoroclebopride: isoflurane- နှင့် ketamine-သွေးဆောင်မေ့ဆေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 21: 589-596 ။ [PubMed]
Nader, MA, မော်ဂန်: D, Gage, HD, Nader SH, Calhoun T က, Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer R ကို, Mach RH အ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 2006; 9: 1050-1056 ။ [PubMed]
ပယ်ရီ JL, Larson eb, ဂျာမန် JP, က Madden GJ, ကာရိုး ME ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် IV ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် Impulse (အထူးလျှော့စျေးနှောင့်နှေး) ။ Psychopharmacology ။ 2005; 178: 193-201 ။ [PubMed]
Piazza PF, Rouge-ပိုတငျးက F, Deminiere JM, Kharoubi M က, က Le Moal က M, Siman အိပ်ချ် Dopamine လှုပ်ရှားမှုဟာ prefrontal cortex အတွက်လျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ predisposed ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးလာသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 567: 169-174 ။ [PubMed]
သည် Le Moal အမ်ဒေါင်လိုက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ရသည် Piazza PV, Deroche-Gamonet V ကို, Rouge-ပိုတငျးက F, စွဲဖို့ predisposed တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အားနည်းချက် phenotype ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 4226-4232 ။ [PubMed]
Retz W က, Rosler M က, Supprian T က, Retz-Junginger P ကို, Thome ဂျေ Dopamine D3 receptor မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic နှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ: Impulse စပ်လျဉ်းနှင့် ADHD-related psychopathology ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 2003; 110: 561-572 ။ [PubMed]
Riddick NV, Czoty PW, Gage, HD, Kaplan JR, Nader SH, Icenhower M က, Pierre ၏ PJ, Bennett ကတစ်ဦး, Garg PK, Nader, MA ။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းလွှမ်းမိုးမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဝိသေသလက္ခဏာများ။ neuroscience ။ 2009; 158: 1257-1265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rouge-ပိုတငျးက F, Piazza PV, Kharouby M က, က Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ်အဆင့်မြင့်နှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ predisposed တိရိစ္ဆာန်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ပြင်းအားအတွက်ပိုရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး။ တစ်ဦးက microdialysis လေ့လာမှုဦးနှောက် Res ။ 1993; 602: 169-174 ။ [PubMed]
Stoffel EC, Cunningham Ka ။ ကြွက်များတွင် locomotor တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တုံ့ပြန်များနှင့်အမူအကျင့် disinhibition အကြားဆက်ဆံရေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007; 92: 69-78 ။ [PubMed]
Thanos PK, Volkow ND, Freimuth P ကို, Umrgaki H ကို, Ikari H ကို, Roth, G, Ingram DK, dopamine D2 receptors ၏ Hitzemann R. Overexpression အရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Neurochem ။ 2001; 78: 1094-1103 ။ [PubMed]
Verdejo-Garcia ကတစ်ဦး, Laerence AJ, Clark ကအယ်လ် Impulse ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသားအဖြစ်: တွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက high-အန္တရာယ်သုတေသန, ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008; 32: 777-810 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Gifford တစ်ဦးက, Hitzemann R ကို, Ding YS, ဦးနှောက် D2 dopamine receptors အားဖြင့်လူသားတွေအတွက် psychostimulants မှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်များ၏ Pappas N. ဘီဘာအို။ Amer J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 1440-1443 ။ [PubMed]
Zald DH, Cowan RL, Riccardi P ကို, Baldwin RM, အန်ဆာရီက MS လီ R ကို, Shelby ES, Smith ကအီး, McHugo M က, Kessler RM ။ Midbrain dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုပြောင်းပြန်လူသားတွေအတွက်အသစ်အဆန်းရှာစရိုက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 14372-14378 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]